Uzihambisa njani izitikha ukusuka kwiTelegram ukuya kwiWhatsApp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uzihambisa njani izitikha ukusuka kwiTelegram ukuya ku-WhatsApp?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 311
Ukuba kukho into ethandwa ngabasebenzisi beTelegram lixabiso elihlukeneyo nelonwabisayo lezincamathelisi elinalo kwiqonga lalo. Apha sinokufumana ezona zitikha zihlekisayo kumnatha, kwaye iindaba ezimnandi zezokuba singazithumela ngaphandle kwengxaki kwezinye izicelo, umzekelo u-WhatsApp.
Ukuba uyayithanda Izitikha zeTelegram kwaye ufuna ukuzithumela kuWhatsApp zininzi iindlela onokuyenza ngazo. Kungenxa yoko le nto kwinqaku elilandelayo siza kukubonisa ezinye zeendlela ezilula nezimnandi zokuthumela izitikha zeTelegram ngqo kwi-WhatsApp yethu.
Yandisa ikhathalogu yakho yesincamathelisi
Ngaba uziva ngathi ingqokelela yakho yeencwadana ze-WhatsApp kufuneka ihlaziywe? Sineendaba ezibalaseleyo kuwe, kwaye yile yokuba kukho indlela elula yokwenza ingqokelela yethu ukuba ikhule ngokukhawuleza: Ukugqithisa izitikha ukusuka kwiTelegram ukuya kuWhatsApp.
Ngokuqinisekileyo ucinga ukuba oku akunakwenzeka, kodwa siyazi ukuba ebomini yonke into inokwenzeka. Ngoku abasebenzisi beTelegram banokubeka izitikha zabo ndawonye kunye nezo zigcinwe kwezinye izicelo zemiyalezo ezinje ngeWhatsApp.
Ukuthetha kumnandi ngakumbi ukuba sikwenza ngokusebenzisa izitikha, kunye neTelegram yenye yezo zicelo ezisinika iintlobo ezahlukeneyo zeemifanekiso. Hlala nathi kwaye ufumane ukuba kufuneka wenze ntoni ukuze zonke izitikha zeTelegram zivele kwiingxoxo zeWhatsApp.
Eyona ndlela ilula yokuhambisa izitikha ukusuka kwiTelegram iye kuWhatsApp
Mhlawumbi uxhalabile yokufumanisa eyona ndlela ilula kunye neyona ikhawulezayo yokudlulisela izitikha zethu zeTelegram ngqo kwi-WhatsApp. Nangona zizicelo ezikhuphisanayo, oku kunokwenzeka ngenxa yendlela ezimbalwa esinokuthi sizenze.
Apha sikushiya inyathelo ngesinyathelo indlela yokuhambisa izitikha ukusuka kwiTelegram ukuya kwiWhatsApp
Vula isicelo seTelegram kwaye uye kwicandelo lokuseta
Emva koko khangela ukhetho "Ukuxoxa" kwaye ekupheleni kwoluhlu uza kufumana enye inketho ngegama "Izitikha kunye neemaski”. Cofa apho ukuze uqhubeke
Kweli candelo uza kubona zonke izitikha ezigcinwe kwiTelegram. Cofa kwindawo okhetha kuyo "isabelo".
Iwindow entsha iya kuvulwa. Apho uyakucofa "Khuphela ikhonkco"kwaye ilungile.
Ngaba kubonakala kulula ukuza kuthi ga ngoku? Amanyathelo angezantsi alula:
Vula isicelo kwaye ucofe kwiglasi yokukhulisa ekunene phezulu.
Kwibar yokukhangela kufuneka ubhale "KhuphelaStickersBot”Kwaye uncamathisele ikhonkco kuloo ncoko.
I-bot iyakuqinisekisa efumene isincamathelisi kwaye iya kuqhubeka nokukhuphela ngokuzenzekelayo kwiselfowuni yakho.
Linda eminye imizuzu kwaye uya kufumana zonke izitikha zakho zixinaniswe kwi-ZIP.
Sele ndinazo efowunini yam, ngoku ndenza ntoni?
Amanyathelo achazwe apha ngasentla asetyenziselwa ukukhuphela izitikha ngqo kwiselfowuni, kodwa ¿ndizithumela njani kuWhatsApp? Yindlela elula ngayo le nkqubo:
Ivula "Umenzi wesitekiI-iOS okanye "iZincamathelisi zobuqu" ze-Android
Ngoku Kuya kufuneka ukhethe ipakethi Ukhutshelwe kwiTelegram kwaye iapp iyakwenza konke okunye. Iya kubaguqula babe zizincamathelisi ezintsha zeWhatsApp ngekhonkco.
Into ekufuneka uyenzile kuku vula ikhonkco kwaye ucinezele "Yamkela". Uya kuba nezincamathelisi kuWhatsApp
1 Yandisa ikhathalogu yakho yesincamathelisi
2 Eyona ndlela ilula yokuhambisa izitikha ukusuka kwiTelegram iye kuWhatsApp
3 Sele ndinazo efowunini yam, ngoku ndenza ntoni?
Nceda ndizifaka njani iividiyo kwi-Instagram ukusuka kwi-PC?